Dota – Gaming Noodle
[Unicode] ယနေ့ Dota Summit 12 ပွိုငျပှဲရှိသညျ Beyond the Summit က ဦးစီတဲ့ Dota Summit 12 ကို ယနစေ့တငျကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ ကွိုတငျစီစဉျထားခွငျးမရှိပဲ ပှဲမစခငျ (၁၀) အလိုမှ ရုတျတရကျ ကွညောခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျးဖွဈပါတယျ။ Starladder ImbaTV Minor အပွီး Los Angeles Major မစခငျ မတျလ (၁၀) ရကျမှ (၁၃) ရကျအထိ Los Angeles က Beyond The Summit ရဲ့ Game House မှာ ကငျြးပမှာပါ။ ဘယျသူတှပေါဝငျကွမှာလဲ? အသငျး (၆) သငျးပါဝငျမှာဖွဈပွီး အားလုံးကို Direct Invite …
ယနေ့ Dota Summit 12 ပွိုငျပှဲရှိသညျ Read More »
Dota Season4အတွက် Dota Plus Update ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ
[Zawgyi] Season4အတွက် Dota Plus Update ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ Dota Plus ဟာ ယခင်က Role Queue လို့ ရခဲ့တဲ့အတွက် လူအများစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး အခုအခါမှာ Player တိုင်း Role Queue လို့ ရသွားတဲ့အတွက် Dota Plus Update မှာ ဘယ်လိုမျိူး လူကြိုက်များတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအသစ်ကို အသုံးပြုမလဲဆိုတာ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ မနက်က ထွက်လာတဲ့ Dota Plus update မှာတော့ အောက်ပါ Features များ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ 1. Avoid Players TI9 Battle Pass နဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Avoid Player Feature …
Dota Season4အတွက် Dota Plus Update ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ Read More »